सन्दीपको सकियो आइपीएल यात्रा, कस्तो रह्यो यो सिजन ? – Saurahaonline.com
सन्दीपको सकियो आइपीएल यात्रा, कस्तो रह्यो यो सिजन ?
काठमाडौं बैशाख २८ ।पहिलो क्वालिफायरमा शुक्रबार राति चेन्नाई सुपर किंग्ससँग ६ विकेटले पराजित भएसँगै दिल्ली क्यापिटल्सले पहिलो पल्ट इण्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल)को फाइनल खेल्ने मौका गुमायो।
सन्दीपले यस सिजनको आइपीएल सन्दीपका लागि औषत रह्यो। दिल्लीका १६ मध्ये ६ खेलमा मौका पाएका सन्दीपले ८ विकेट लिए। २३ ओभर बलिङ गरेका उनले २ सय १० रन खर्चे। उनको इकोनोमी ९.१३ को रह्यो।
दिल्लीका बलरहरुमध्ये सर्वाधिक विकेट टेकरका रुपमा सन्दीप सातौं नम्बरमा रहे। दिल्लीका सर्वाधिक विकेट टिकेर कासिगो राबाडाले २५ विकेट लिए। त्यसपछि क्रिस मौरिस(२३), इशान्त शर्मा(१३), अमित मिश्रा(१३), अक्सर पटेल(१३), किमो पाउल(९) पछि सन्दीप रहे।
त्यसपछि दिल्लीले थप ४ खेल खेल्दै दोस्रो क्वालिफायरसम्म स्थान बनाएपनि सन्दीप भने बेन्चमै बस्न बाध्य बने।
अघिल्लो सिजनमा सन्दीपले दिल्लीबाट पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी लिग खेलेका थिए। त्यस सिजनमा पुछारका तीन खेल खेल्दा सन्दीपले ५ विकेट लिएका थिए।